ट्रकोमा निवारण, गौरव मान्नुपर्ने अर्काे एउटा उपलब्धि – Health Post Nepal
२०७७ साउन २८ गते | Wednesday, 12 Aug, 2020
२०७५ मंसिर ८ गते १९:०४
नेपालमा जनस्वास्थ्य समस्याका रूपमा रहेको ट्रकोमारोग निवारण भएको छ । करिब चार दशकअघि उच्च प्रकोपदर भएको यो रोगलाई निवारणको अवस्थामा ल्याइपुर्याउन वर्षौंदेखि भएको प्रयत्नले सार्थकता पाएको छ ।
विश्व स्वास्थ्य संगठनले यसवर्ष नेपालमा ट्रकोमारोग निवारण भइसकेको घोषणा गरेको छ । संगठनले परीक्षण र प्रमाणीकरण गरेर गरेको घोषणाले निम्न अवस्थाको संकेत गर्छ । विश्व स्वास्थ्य संगठनले प्राविधिक रूपमा हाम्रो अवस्थाको परीक्षण गरेर रोगलाई आगामी दिनमा पनि फर्किन नदिने गरी हामी कति तयार छौँ भन्नेसमेत हेर्छ ।
मापदण्डअनुसार १ देखि ९ वर्षभित्रका बालबालिकामा ५ प्रतिशतभन्दा कममा र सम्पूर्ण जनसंख्यामा १ हजारजनामा १ भन्दा कममा संक्रमण भएको अवस्थामा निवारण घोषणा गर्न सकिन्छ ।
हाम्रो संविधानले स्वास्थ्यसेवालाई मौलिक हकका रूपमा स्थापित गरिसकेको छ । सोअनुसार आधारभूत स्वास्थ्यसेवाको सूचीमा आँखा सेवालाई पनि राखिसकेको छ ।
– प्रायः सक्रिय ट्रकोमा १ देखि ९ वर्षका बच्चामा देखिन्छ । यस रोगको उपचार एन्टिबायोटिक झोल तथा चक्कीद्वारा गरिन्छ ।
– १५ वर्षभन्दा माथिका ० दशमलव २ प्रतिशत मानिसमा मात्र यस रोगको विकसित रूप (ट्रकोमाटस ट्रिकायसिस) भेटिन्छ, जसको उपचारका लागि आँखाको पटल (परेली)को शल्यक्रिया गर्नुपर्छ ।
– हाम्रो स्वास्थ्यप्रणालीले ट्रिकायसिसको कुनै पनि नयाँ रोगी पत्ता लगाई उनीहरूको उपचार गर्न सक्छ ।
सन् १९८१ को पूर्ण जनसंख्यामा आधारित सर्वेक्षण (प्रिभ्यालेन्स सर्वे)ले कुल जनसंख्याको ६ दशमलव ९ प्रतिशतमा यो रोग देखाएको थियो भने २ दशमलव ४ प्रतिशत ट्रकोमाका कारण दृष्टिविहीन बनेको पाइएको थियो । २० भन्दा बढी जिल्लामा १० प्रतिशत जनसंख्यामा ट्रकोमा संक्रमण भइसकेको अवस्था (एक्टिभ ट्रकोमा) थियो । यस आधारमा ट्रकोमा अन्धोपनको दोस्रो प्रमुख कारण थियो । सोलगत्तै सरकारले नेपाल नेत्रज्योति संघलाई जिम्मा दिएर रोग नियन्त्रणका कार्यक्रम सञ्चालन गरेको थियो ।
जनस्वास्थ्यका क्षेत्रमा यस्ता बृहत् अभियान निकै कठिनाइ र उतार–चढाव पार गर्दै अगाडि बढेका हुन्छन्, जसले दिने नतिजाले हामी सबैलाई ठूलो सन्तुष्टि मिल्छ ।
सरकारले आँखा उपचारको क्षेत्रमा ४ दशकदेखि क्रियाशील संस्था नेपाल नेत्रज्योति संघलाई सन् १९८१ देखि नै आँखा स्वास्थ्यसेवाको राष्ट्रिय दायित्व सुम्पेको थियो । राष्ट्रिय नीतिअनुसार सन् २०१७ भित्रमा खस्रेरोग निवारण गर्ने लक्ष्य राखेर संघले शल्यक्रिया, एन्टिबायोटिक्स खुवाउने, हात–मुख धुनेलगायत वातावरणीय सुधारका कार्यक्रम एकीकृत रूपमा सञ्चालन गरेको थियो ।
नेपालले सन् २००५ मा मातृ तथा शिशु धनुष्टंकाररोग निवारण गरेको थियो । सन् २०१४ मा नेपाल पोलियोमुक्त राष्ट्र घोषित भयो । यसवर्ष नेपालमा ट्रकोमारोग निवारण भएसँगै हामीले गौरव मान्नुपर्ने अर्काे एउटा उपलब्धि थपिएको छ ।
सन् १९८० को दशकमा ट्रकोमा रोकथाम गर्न सकिने अन्धोपनको दोस्रो मुख्य कारण थियो । त्यतिवेला नेपालका कतिपय जिल्लामा ट्रकोमारोगको प्रकोपदर २३ प्रतिशत थियो भनेर सुन्दा मलगायत धेरैलाई अचम्म लागेको थियो । नेपालले यी सबै लक्ष्य हासिल गर्नु भनेको हाम्रा लागि निकै गौरवको विषय हो ।
विश्व स्वास्थ्य संगठनको सेफ रणनीति (शल्यक्रिया, एन्टिबायोटिक्स, अनुहारको सरसफाइ र वातावरणीय सरसफाइको संक्षिप्त रूप) कार्यान्वयनमा ल्याएपछि हामी हजारौँ मानिसलाई अन्धोपनबाट बचाउन सफल भएका छौँ । एन्टिबायोटिक्स खुवाउनुका साथै लाखौँमा सरसफाइ र रोगसम्बन्धी चेतनाविस्तारपछि निवारण सम्भव भएको हो ।
स्वास्थ्य मन्त्रालयले सन् २००२ मा नेपाल नेत्रज्योति संघको संयोजकत्वमा राष्ट्रिय ट्रकोमा कार्यक्रम आरम्भ गरेको थियो । सन् २००४ मा ४० हजारमा यस रोगको विकसित रूप रहेको तथा शल्यक्रिया आवश्यक भएको अनुमान गरिएको थियो भने २१ लाख ६० हजारलाई सक्रिय ट्रकोमा भएको अनुमान गरिएको थियो ।
यस कार्यक्रमअवधिमा (अर्थात् आरम्भ भएको मितिदेखि हालसम्म) २९ हजार ४ सय ६८ शल्यक्रिया गरिएका थिए, १ करोड ३६ लाखभन्दा बढीलाई जिथ्रोम्याक्स चक्की वितरण गरिएको थियो भने धेरै मानिसलाई राम्रोसँग मुख धुने र आफ्नो शरीरको सरसफाइमा ध्यान दिने तरिका र त्यसको महत्वबारे अवगत गराइएको थियो ।
एन्टिबायोटिक्स खुवाउनुका साथै लाखौँमा सरसफाइ र रोगसम्बन्धी चेतनाविस्तारपछि निवारण सम्भव भएको हो ।
साथसाथै, वातावरणीय सरसफाइकेन्द्रित विभिन्न क्रियाकलाप आयोजना गरिएका थिए । फलस्वरूप ट्रकोमारोग निवारण भयो । यस कार्यक्रमलाई सफल बनाउन विभिन्न राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय साझेदारहरूले महत्वपूर्ण भूमिका खेलेका छन् ।
ट्रकोमा निवारण कार्यक्रम पूर्ण समर्पणका साथ कार्यान्वयन गरेकोमा म नेपाल सरकार र स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका तर्फबाट नेपाल नेत्रज्योति संघलाई हृदयदेखि नै धन्यवाद दिन्छु ।
समुदायमा स्वच्छ पानीको व्यवस्था, सफाइ र सम्बन्धित वातावरणको सरसफाइमा सुधार गर्न योगदान दिएकोमा खानेपानी तथा ढलनिकास विभाग पनि यो उपलब्धिको श्रेयको भागीदार छ ।
यो प्रयासमा थुप्रै अन्तर्राष्ट्रिय संघ–संस्थाको साथ छ । इन्टरनेसनल ट्रकोमा इनिसिएटिभ (आइटिआई)ले निःशुल्क प्राविधिक सहायता तथा जिथ्रोम्याक्स चक्की प्रदान गरेको थियो । सर्वेक्षण, प्रशिक्षण र बृहत् औषधि वितरण कार्यक्रम सञ्चालन गर्न आर्थिक सहयोगका लागि आरटिआई–इन्भिजन र आर्थिक सहयोग तथा आरटिआई इन्भिजनको थियो । यो महत्वपूर्ण सहयोगका लागि अमेरिकी विकास नियोग (युएसएआइडी)लाई धन्यवाद दिन चाहन्छु ।
प्राविधिक सहयोग तथा प्रकोपदर उच्च भएका थुप्रै जिल्लामा बृहत् औषधि वितरण कार्यक्रमपूर्व तथा कार्यक्रमपश्चात् विभिन्न चरणका सर्वेक्षणहरू गरेर सहयोग गरेकोमा म विश्व स्वास्थ्य संगठनलाई पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु । अभियानमा ब्याकलग ट्रकोमाटस ट्रिकायसिस शल्यक्रियाहरू सम्पन्न गर्नका लागि आर्थिक सहयोग उपलब्ध गराउने भारतीय दूतावास धन्यवाद दिन्छु ।
लगभग ३० हजार शल्यक्रियामा संलग्न सम्पूर्ण आँखा शल्यचिकित्सक तथा देशभर सञ्चालित वृहत् औषधि वितरण कार्यक्रममा अजिथ्रोमाइसिन वितरण गर्न खटिएका सम्पूर्ण स्वास्थ्यकर्मी एवम् महिला सामुदायिक स्वास्थ्य स्वयंसेविका पनि यो उपलब्धिका हिस्सेदार हुन् ।
(नेपालमा ट्रकोमारोग निवारणका अवसरमा आयोजित समारोहमा डा. प्याकुरेलले दिएको मन्तव्यको सम्पादित अंश)
Tags: ट्रकोमा, डा. सुशीलनाथ प्याकुरेल, नेत्रज्योति संघ, नेपाल आँखा अस्पताल
काठमाडौंमा कोरोनाबाट थप २ को मृत्यु, संख्या ८६ पुग्यो
प्रदेश ५ मा आयुर्वेदिक औषधी फस्टाउँदै, ब्रान्डिङको तयारी
प्रदेश ५ मा आयुर्वेदिक औषधी उत्पादन
उपचाररत कोराना संक्रमित जनकपुरका पूर्वमेयर गिरीको मृत्यु
प्रदेश १मा ६० हजारको काेराेना परीक्षण गर्दा , १५ सयमा संक्रमण पुष्टि
देशभर ३ जना भेन्टिलेटरमा सहित ८५ आइसियुमा, होम आइसोलेसनमा २२४